Dee D o e: တူညီခြင်း ရဲ. တ ဖက်မှာ...(သို.) ချစ် သော အမေ
တူညီခြင်း ရဲ. တ ဖက်မှာ...(သို.) ချစ် သော အမေ
၉ လ လွယ် ၁၀ လ ဖွား သား ကို မွေး ဖွား သန်.စင် တော့ အ ဖြူ ရောင် အ နှီး နဲ. ရစ် ပတ် လို. ဘေး ကင်း လုံ ခြုံ စေ ခဲ့ တယ် မ ဟုတ် လား အ မေ ရယ်.......တတ် လွန်း သိ လွန်း လို. ပြော တာ မ ဟုတ် ပါ ဘူး......မွေး ကင်း စ က လေး ငယ် ကို အ ဖြူ ရောင် အ နှီး နဲ. ရစ် ပတ် တာ မြင် တော့ အ မေ လဲ ကျွန် တော့ ကို ဒီ လို ဘဲ နွေးထွေးစေ ခဲ့ မယ် လို. ယုံ ကြည် လို. ပါ အ မေ.......
က လေး ငယ် ကို သူ.မေ နို.ချို တိုက် ကျွှေး တော့.....အ မေ လဲ သား ရဲ. ဆာ လောင် မှု. ကို ကင်း စေ ကြောင်း အ မေ့ ရင် ဖြစ် ဖြူ ရောင် အ သက် တွေ တိုက် ကျွှေး ခဲ့ မှာ မ လွဲ ပါ ဘဲ မ ဟုတ် ပါ လား အမေ...............
ဟိုး ငယ် ငယ် က........
အ မေ ပြော ပြ ခဲ့ တဲ့ အ ဖြူ ရောင် အ ကြောင်း......
သန်.ရှင်း ခြင်း ရဲ. န မိတ် ပုံ.......
အေး မြ ခြင်း ရဲ. အ တိတ်......
တည် ကြည် တဲ့ အ ဓိ ပ္ပါယ်.......တွေ အ မေ ပြော ပြ တော့ သား နား လည် သ လိုလို နဲ. အ မှန် တ ကယ် တော့ သား နား မ လည် ခဲ့ ပါ ဘူး အ မေ ..........
ကျောင်း တက် ခါ စ ကျောင်း အ င်္ကျီအ ဖြူ ရောင် ကို မီး ပူ ကော့ နေ အောင် တိုက် ပြီး ၀တ် ခိုင်း တော့ သား ရှက် လို. ပါ အ မေ..
အ မေ့ ရဲ. မျှော် လင့် ချက် အ နာ ဂတ် ရဲ. သား..........
အ မေ့ ရဲ. လင်း ရောင် ခြည်....
အ မေ့ နား မှာ အ မြဲ ရှိ မယ့် သား.....
အ ဖြူ ရောင် ၀တ် ရုံ ၀တ် ကို ၀တ် ပြီး ဘု ရား အ ကြောင်း တ ရား အ ကြောင်း ဟော ပြော မယ့် သား.........အ ဖြူ ရောင် နဲ. သား သိပ် လိုက် တာ ဘဲ လို. ပြော တဲ့ အ မေ.....ဒီ အ သား မဲ တဲ့ သား ကို အ ဖြူ ရောင် တွေ ဘဲ ဆင် တဲ့ အ မေ.......အ ဖြူ ရောင် တွေ ထဲ က အ မေ့ ကို သား သ တိ ရ လို. ပါ အ မေ....
ဒီ လို နဲ. လူ ရယ် လို. ဖြစ် လာ လို. ပေါင်း တတ် သင်း တတ် လာ တော့ သား လေ အဖြူ ရောင် တွေ နဲ. တ ရင်း တ နှီး ပါ ဘဲ.......အ မေ.....ဒါ ပေ မယ့် သား ရင်း နှီး တဲ့ အ ဖြူ ရောင် တွေ က အ မေ နှစ် သက် တဲ့ အ ဖြူ ရောင် ဖြစ် မှ ဖြစ် ပါ လေ စ..............
အ ဖြူ ရောင် စီး က ရက် ရဲ. မီး ခိုး တွေ ကို အ ရှိူက် မက် မက် ရှူ ရှိုက် ရင်း အ မေ ပြော တဲ့ အ ဖြူ ရောင် ရဲ. အ ဓိပ္ပါယ် အ ကြောင်း...အ ဖြူ ရောင် ၀တ် ရုံ ၀တ် တဲ့ ဘုန်း တော် ကြီး တွေ အ ကြောင်း သား နား ထောင် ခဲ့ ဘူး တယ် နော် အ မေ...ဒီ ဆေး လိပ် မီး ခိုး ငွေ. တွေ ကို ရှု ရှိူက် ရင်း အ မေ့ အ ကြောင်း......အ မေ ပြော တဲ့ အ ဖြူ ရောင် ရဲ. အ ဓိ ပ္ပါယ် တွေ အ ကြောင်း.....အ ဖြူ ရောင် ၀တ် ရုံ ၀တ် တဲ့ ဘုန်း တော် ကြီး အ ကြောင်း သား စဉ်း စား ခဲ့ ဖူး....သ တိ ရ ခဲ့ ဖူး ပါ တယ် အ မေ.....
တ စ စ နဲ. လူ လား မြောက် လာ တော့ များ ပြား လှ တဲ့ အ ပေါင်း အ သင်း တွေ ကြား လူ ရာ ၀င် အောင် လို. ပြော ရ မ လား....အ ဖြူ ရောင် စီး က ရက် သာ မ က အ ဖြူ ရောင် သေ ရည် တွေ ပါ သောက် သုံး လာ ခဲ့ ပြီ အ မေ....နောက် ဆုံး အ ရက် ရဲ. ကျေး ကျွှန် ဘ၀...တား မ ရ တဲ့ အ ဆုံး အ ပေါ စား အ ရက် ကို ဖြတ် လို. အ ကောင်း စား အ ရက် နီ နီ ကို တ နေ. နည်း နည်း သောက် ပါ လား သား ရယ် လို. ပြော တော့ အ မေ့ မျက် ၀န်း မှာ ကြည် လဲ့ သန်. စင် တဲ့ မျက် ရည် တွေ သား တွေ. ဖူး ပါ တယ် အ မေ........ဒါ ပေ မယ့် ဇွတ် တ ရွတ် နိုင် တဲ့ သား ဈေး ပေါတဲ့ အ ဖြူ ရောင် အ ရက် နဲ.ခ ရီး ဆက် ခဲ့ တယ် လေ...အဲ ဒီ အချိန် ထိ အ မေ့ ရဲ. ဆုံး မ သံ တွေ မူး ယစ် ရီ ဝေ တဲ့ အ သိ ညဏ် ကြား က မှတ် မိ နေ စဲ ပါ အ မေ......
အ တောင် အ လက် စုံ လို. ဟိုး အ ဝေး ကို ပြန် မယ် လုပ် တော့ အ မေ့ မျက် ၀န်း မှာ ဖြူ စင် သန်.ရှင်း တဲ့ မျက် ရည် တွေ နဲ. ဒီ ကြီး ကောင် ကြီး မား သား ကို စိတ် မ ချ ခြင်း တွေ နဲ. လိမ္မာ စေ ကြောင်း တ ဖွ ဖွ မှာ လို......အ ဖြူ ရောင် ပစ္စည်း တွေ နဲ. ဝေး ဝေး နေ ဖို.မှာ လို မဆုံး ခဲ့ ဘူး နော် အ မေ......
အ မေ နဲ. အ ဝေး မှာ....အမေ ပြော တဲ့ အ ဖြူ ရောင် တွေ အ ကြောင်း.....အ ဖြူ ရောင် ၀တ် ပြီး ဘုရား ရဲ. ဒေသ နာ တွေ ဟော ပြော တဲ့ ဘုန်း တော် ကြီး အ ကြောင်း မကြား ရ တော့ ပေ မယ့် သား က တော့ အ ဖြူ ရောင် တွေ နဲ့မ ကင်း ခဲ့ ပါ ဘူး အမေ......အ မေ့ ရဲ. ဘုရား ရှိခိုး သံ တွေ တိတ် ဆိတ် သွာ မှာ မဟုတ် သလို....သား ဟာ လည်း အ ဖြူ ရောင် ပစ္စည်း တွေ နဲ. ၀ုန်းဒိုင်း ကြဲ နေ ခဲ့ တာ လေ.....
ငွေ ကြေး ကို အ ဝေး မှာ နေ တဲ့ သား မျက် နှာ မ ငယ် စေ ဖို. နှီး မျိုး စုံ နဲ. အမေ ဖန်း တီး ပေး ခဲ့ တယ် သလို....သား ရဲ. အဖြူ ရောင် လိမ် ညာ တောင်း ခံ တဲ့ ငွေ ကြေး ကို လည်း သိ သိ နဲ. လိမ္မာ စေ ကြောင်း တ ဖွ ဖွ ပြောရင်း ပို. ပေး ခဲ့ တယ် နော် အမေ.....ဒီ လို ပြီး ပြည့် စုံ ခြင်း ရဲ.နောက် မှာ နောက် ထပ် အ ဖြု ရောင် တစ် ခု သား ဘ၀ ထဲ ကို စိုး မိုး ၀င် ရောက် လာ ခဲ့ ပြန် တယ် အမေ......
အဲဒီ အ ဖြူ ရောင် အ မှုန်.တွေ ကို မီး ရှို. ရှု ရှိုက် ရင်း အ ဖြု ရောင် တိုင်း ပြည် မှာ သား အား လုံး ကို မေ့ နေ ခဲ့ ဖူး တယ် အမေ...သား အဲ လို ပျော် နေ မယ့် အ ချိန် အ မေ့ မျက် ၀န်း မှာ သား အ တွက် စိုး ရိမ် စိတ် တွေ နဲ. သန်.စင် တဲ့ မျက် ရည် တွေ စီး ကျ နေ မယ် လို. သား တ ကယ် မ တွေး မိ ခဲ့ တာ အ မှန် ပါ ဘဲ အ မေ..............အ ဖြူ ရောင် တွေ ရဲ. သဘော တ ရား....အဓိပ္ပါယ်သာ ရေရေ ရာ ရာ မ သိ ပေ မယ့် အ ဖြူ ရောင် ပစ္စည်း တွေ ရဲ. အ ရာ သာ..အ တွေ. အ ထိ ကို တော့ သား ကောင်း ကောင်း သိ လို. မ ပတ် သက် ဘဲ မ နေ နိုင် ခဲ့ ဘူး အမေ.....
အ ဖြူ ရောင် အမှုန်. တွေ ရှု ရှိူက် တာ အား မရ လို. အ မေ ချစ်တဲ့ သား နဲ. တ ကိုယ် တည်း ဖြစ် အောင် သားရဲ. သွေး ကြော ထဲ ထိုး သွင်း ခဲ့ ပြီ အ မေ....ဒီ အ ချိန် မှာ မ ဖြစ် နိုင် တော့ တဲ့ သား ..... အ ဖြူ ရောင် ၀တ် တဲ့ ဘုန်း တော် ကြီး အ ကြောင်း မ ပြော တော့ ပေ မယ့်.......ဖြူ စင် တဲ့ မေတ္တာ ရှင် ခရစ် တော် အ ကြောင်း အ မေ ပြော ပြ ရှင်း ပြ ခဲ့ သေး တယ် နော် အ မေ.....အ မေ ပြော တာ တွေ သား သိ သ လို လို နဲ. အ သိ ခေါက် ခက် အ ၀င် နက်.......သား ကဥပက္ခာ ပြု ခဲ့ တယ်................
ဖြူ စင် တဲ့ မေတ္တာ ရှင် ခရစ် တော် ဟာ အ ပြစ် တွေ ခွင့် လွတ် တဲ့ အ ကြောင်း...သူ ဆီ သွား လို. ၀န် ချ တောင်း ပန် ကာ ဘ၀ ဆက် ဖို. သား ကို လည်း ဒီ အ ဖြူ ရောင် ပစ္စည်း တွေ နဲ. ဖြတ် လို. အ မေ့ ဆီ ပြန် လာ ဖို. အ မေ ပြော တုန်း က သား အ မှတ် တ မဲ့ ပါ ဘဲ အ မေ.....
သား မှာ ခွင့် လွတ် မယ့် အ မေ ရှိ တယ်...အ ပြစ် ခွင့် လွတ် ပြီး အ ခွင့် ချမ်း သာ ပေး မယ် ခရစ် တော် ရှိတယ်.......ဒါ ပေ မယ့်
ပတ် ၀န်း ကျင် နဲ. လူ. အ သိုင်း အ ၀ိုင်း က ခွင့် လွတ် နိုင် တဲ့ အ ဆုံး မှာ တော့.......ဘယ် သူ မှ မ ၀တ် ဆင် ချင် တဲ့ အ ဖြူ ရောင် ထက် အောက် ကို သား ၀တ် ဆင် ခဲ့ ရ ပြီ အ မေ....အဖြူ ရောင် ပစ္စည်း တွေ ကြောင့် မဲ ညစ် ခဲ့ ရ တဲ့ ဘ၀ ကို ချွေး နဲ. လျှော် ဖွပ် ရ မယ် တဲ့ လေ.. အ မေ....................
ဒီ အ ဖြူ ရောင် ထက် အောက် ကို ၀တ် ဆင် ရ တော့ သား အ မေ့ ကို သ တိ ရ တယ် အ မေ ရယ်......ဒါ ပေ မယ့် သားဝတ် ဆင် တဲ့ ထက် အောက် အ ဖြူ ရောင် ဟာ.....အဖြူ ရောင် ၀တ် ရုံနဲ. တော့ လား လားမှ မ သက် ဆိုင် တဲ့ အ တွက် အမေ့ သား ကို မ မြင် စေ ချင် ပါ ဘူး အမေ........
အမေ ကြိုက် တဲ့ အဖြူ ရောင် တွေ နဲ. သား ရှင် သန် ပတ် သက် ခဲ့ ပါ တယ် အမေ ....အမေ ပြောတဲ့ အ ဖြူ.......သား ပတ် သက် ခဲ့ တဲ့ အ ဖြူ ဘာ တွေ ကွဲ ပြား လို. ဘာ တွေ ခြား နား လည်း ဆို တာ သား မ သိ တာ...သားရဲ. မိုက် မဲ မူ. ပါ ဘဲ အမေ....
""အမေ.....X'Mass ရောက် တော့ မယ် နော် အမေ............"""
Posted by ဒီးဒိုး at 10:05 AM